Wariyeyaal Reer Sweden ah oo Bari Maxkamad Addis Ababa Uga Bilaabanayso – Rasaasa News
Wariyeyaal Reer Sweden ah oo Bari Maxkamad Addis Ababa Uga Bilaabanayso
Laba wariye oo reer Swedish ah oo la qabtay iyaga oo la socda koox dabley ah oo laga mamnuucay Ethiopia bishii July 1, 2011, mudana ku xidhnaa Ethiopia, ayaa bari maxkamad lagu saarayaa magaalada AddisAbaba.
Labada wariye ee lagu kala magacaabo Martin Schibbye iyo Johan Persson, ayay bari maxkamadoodu ka dhacaysaa Addis Ababa, ayaa waxaa difaaci doona saddex garyaqaan. Wakiilo ka socda safaarada Sweden Addis Ababa jooga ayaa goob joog ka noqon doona maxkamada. Ehelada labada wariye oo Addis Ababa jooga ayaa maanta loo diiday in ay arkaan, waxaase la kulmay shaqaalaha safaarada oo sheegay in ay muuqaalkoodu wanaagsan yahay.
Sida la sheegay wariyeyaashan ayaa la qabtay iyaga oo ku safraya gabalka uu muranku ka jiro ee Ogaden, si ay u baadhaan dambiyada loo haysto Ethiopia oo ah in ay gashay xasuuq dadweyne.
Dawlada Ethiopia ayaa sheegtay in wariyeyaashan la qabtay kol uu dagaal dhex maray ciidamada dawlada iyo maleeshiyadii ay la socodeen, waxaana lala qabtay 2 maleeshiya ah.
Dacwada ay Ethiopia ku hayso wariyeyaashan ayaan ahayn oo kaliya in ay si sharci daro ah ku galeen Ethiopia, laakiin waxay la socdeen oo ay caawinayeen urur argagixiso ah. Waxaana lagu qaadi doonaa qodob loo dajiyey kuwa ay Ethiopia u aqoonsatay argagixisada.
Dawlada Sweden ayaa isticmaalaysa awood kasta oo ay ku soo furan karto muwaadiniinteeda dambi kasta oo lagu helo. Waxaase isweydiin leh Sweden ma ku guulaysan doontaa, maadaama ay hore ugu xidhnaayeen muwaadiniin reer galbeed ah oo loo haysto dambi la mid ah kan loo haysto wariyeyaasha reer Sweden.
Hadii ay dhacdo in la sii daayo wariyeyaasha reer Sweden, dawlada Ethiopia iyo dawlada Canada waxay garab mareen xuquuqda sinaanta dadka iyada oo aan loo eegin midab iyo diin midna.